ZTE Axon Mini: nyocha na echiche | Gam akporosis
N'oge mbipụta ikpeazụ nke IFA na Berlin, onye na-emepụta ihe na China juru ya anya na ntinye akara Axon, ọtụtụ njedebe dị elu nke ga-eru ahịa Europe. Ugbua anyị hụrụ ZTE Axon Elite, ugbu a, obu uzo nke ZTE Axon Obere.
N'ezie, nke ahụ doro anya: ZTE a pere mpe nwere obere. Ezigbo ọnụ n'usoro arụmọrụ, nwere atụmatụ dị iche na nke na-emebi emebi yana otu mana: ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na Android 5.1. Enweghị m oge ọzọ m ga-ahapụrụ gị ya nyocha na Spanish nke ZTE Axon Mini.
1 Ime ihe ike ike na iche iche imewe
3 MiFavor, akwa nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ na-eme ka ọ ghara iru bloatware
4 ZTE Axon Mini na-egosi akwara nwere ihu igwe AMOLED dị egwu
5 Igwefoto zuru oke na-enweghị oke ngosi
6 Osisi foto nke ZTE Axon Mini
7 Onwe ya
Ime ihe ike ike na iche iche imewe
Dịka ị nwere ike ịhụ na nyocha vidiyo na Spanish nke ZTE Axon Mini, ekwentị a nwere atụmatụ dị ịtụnanya ma bụrụ nke na-enweghị isi, maka nke ahụ ndị na-ekwu okwu, na mgbakwunye na ụda ọla edo nke ọnụ.
Banyere oke nke ZTE, kwuo na n'ókèala Eshia na Agba ọla edo ma ọ bụ champeenu na-akpata mmetụ n'etiti ndị ọrụ ka onye nrụpụta China kpebiri ịnwale otu agba a na ahịa Europe. Onwe m, ọ ga-amasị m ịnweta ụdị agba sara mbara, mana na agba ndị ahụ.
Ma mgbe ahụ enwere okwu nke imi ihe n'ihu. Enwere m mmasị na ya, ọ bụ ezie na m ghọtara na e nwere ndị mmadụ na-emepụta ga-atụghachi azụ. Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye nwere ike ịgọnahụ na ZTE Axon Mini nwere njiri mara mma.
Ihe atụ mbụ anyị hụrụ na nke ya ígwè ahụ nke aluminom-titanium alloy na-enye nnukwute iguzogide ọnụ. Na mgbakwunye, ZTE enyela Axon Mini ihe eji egbu maramara iji meziwanye njide ya.
Ebe m na-ekwenyeghị nke ukwuu bụ n'azụ ya. Ọnụ ZTE nwere ahụ igwe, mana na ya elu na ala n'akụkụ anyị pụrụ ịhụ abụọ n'ọnyá nke adịgboroja akpụkpọ anụ, dị rịba ama ụdị 4, ebe ha debere antennas ahụ. Nke ahụ bụ ezigbo azịza afọ ole na ole gara aga, mana taa ọ dị m ka ọ bụ ihie ụzọ na ZTE ahọrọla sistemu a. Ọ bụ eziokwu na akụkụ a dị mma na imetụ aka ma mee ka mmetụta ahụ dị nro dị nro, eziokwu bụ na ibe nke akpụkpọ anụ adịgboroja na-agbaji ọtụtụ ihe na mma nke ekwentị.
N'ịga n'ihu na azụ, ihe mmetụta mkpịsị aka capacitive pụtara ìhè na-arụ ọrụ ọbụlagodi na ihuenyo ahụ na-eje ozi, dịka ọmụmaatụ, mepee ekwentị. Na igwefoto na abuo ikanam flash Ha na-anọdụ ebe ndị Axon Elite si sistemụ igwefoto abụọ na-eji eme ihe, na-egosi n'etiti ha ụkpụrụ ahụ nwere akụkụ atọ n'ihu ndị ọkà okwu.
N'akụkụ n'ihu ZTE Axon Mini anyị ga-ahụ ihuenyo nke kachasị n'ọnụ ọgụgụ nke elu ala ahụ ekele maka obere bezels. Axon Mini enweghị bọtịnụ gam akporo anụ ahụ, kama ọ na-eji bọtịnụ ngwanrọ nke enwere ike zoo n'oge ọ bụla, nhọrọ bara ezigbo uru.
Enwere ike ịchọta bọtịnụ njikwa olu n'akụkụ aka ekpe nke ekwentị ahụ, ebe akụkụ aka nri bụ ebe akara aka na bọtịnụ ya dị, yana tray maka kaadị nanoSIM abụọ ma ọ bụ a nanoSIM + micro SD kaadị.
Ekwentị nwere a obi ụtọ, N'ihi anụ ahụ ya, na mgbakwunye na inye ezigbo njide, ihe m nwere ekele. Ya 140 grams nke ịdị arọ na-eme ka ekwentị dị mma na ọ dịghị ada mbà gị mgbe eji ogologo oge. Enwere m mmasị n’eziokwu na ZTE Axon Mini na-etinye ọkà okwu n’iru ebe ọ bụ na anaghị m eji aka m ekpuchi mmepụta ọdịyo mgbe m na-ele vidio ma ọ bụ na-egwu egwuregwu vidiyo. Point maka ZTE na nke a.
ZTE Axon Obere
Akụkụ X x 143.5 70 7.9 mm
Ibu ibu 140 grams
Usoro njikwa A gam akporo 5.1.1 L
Ihuenyo AMOLED 5.2 5.5 sentimita 1920 × 1080 pixels (424dpi)
Nhazi Qualcomm Snapdragon 616 asatọ-isi (anọ A-53 cores na 1.5 GHz na 4 ọzọ Cortex A-53 cores na 1.2 GHz)
Nchekwa n'ime 32GB gbasaa site na MicroSD ruo 128GB.
Igwefoto na-aga n'ihu Samsung 3M2 13 megapixels + 2 megapixels nwere sistemụ igwefoto abụọ / autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation
Njikọ DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM redio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Ndị 3G (HSDPA 850/900/1900/2100) 4G band (band 1 (2100) 3 (1800) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 20 (800) 38 (2600) 40 ( 2300) 41 (2500)
Atụmatụ ndị ọzọ Metal ahụ / mkpisiaka ihe mmetụta / accelerometer / gyroscope / iris njirimara
Batrị 2.800 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa 285 euro na Amazon
Teknụzụ anyị na-eche ekwentị dị ike. Na nke a ngwaike nke ZTE Axon Obere Ugbu a, ọ gụnyere oke ọhụụ ahụ, na-eweta oke ngwọta zuru oke nke ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ ọdịnaya ọ bụla nke multimedia ma ọ bụ egwuregwu vidiyo na-enweghị ọtụtụ nsogbu, dịka ị nwere ike ịhụ na nyocha vidiyo.
ZTE Axon Mini nwere Nkwado Force Touch na ihuenyo gị, ya bụ, nnabata nke nrụgide na-arụ na ihuenyo. Taa enwere ngwa ole na ole na-erite uru na teknụzụ a, mana eziokwu nke inwe ike ịmepụta ntụtụ nke, na mgbakwunye na ide koodu ahụ, na-enyekwa gị ohere ịhazi ọkwa nrụgide na-enye ZTE Axon Mini ihe nchekwa ọzọ buru n'uche akaụntụ.
El capacitive mkpisiaka mmetụta nke dị n'azụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụghị nke kachasị na ahịa iji gụọ akara mkpisiaka, mana ọnụego nnabata ya dị elu. Anyị nwekwara ike unlock kpọghee ekwt ZTE Axon Mini site na olu ya na usoro iris, n'agbanyeghị na ha nwere nsogbu ndị ọzọ; nkwanye okwu mgbe ụfọdụ na-ada ada na onye na - agụ iris nwere nsogbu na ndị na - eyi ugogbe anya. Mma-arapara na mkpisiaka lokpọghe usoro na-ahapụ iris na olu ude iji gosi oyi na ndị enyi.
Achọrọ m mesie mgbawa raara onwe ya nye maka njikwa ọdịyo AK4961 DAC, na-enye ZTE Axon Mini ezigbo ezigbo mma, na-enye onyinye mma Hi-Fi.
Ọ na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka Samsung Galaxy S7? O doro anya na ọ bụghị, mana ọ ga-ezute karịa mkpa nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ. Mgbawa Snapdragon 616 ọ zuru oke maka iji ya kwa ụbọchị, ọbụlagodi igwu egwuregwu vidio chọrọ 3D itinye. Nrụ ọrụ ya na-arụ ọrụ karịrị nke ziri ezi, ọ bụ ezie na enwere ngalaba nke na-eme ka ojiji niile nke ZTE Axon Mini gharazie: ọfụma ahaziri iche dị egwu.
MiFavor, akwa nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ na-eme ka ọ ghara iru bloatware
Enweghị m mmasị na okpu ndị ọdịnala nke imirikiti ndị nrụpụta na-eji. Echere m na HTC na Samsung na-arụ obere ọrụ a na-anabata, mana, ewezuga Motorola, onye ekwentị ya na-eji obere nhazi yana ihe ha gbakwunye bara uru na nke ahụ, echeghị m na akara a na-arụ ezigbo ọrụ na nke a gbasara. Mana ihe ZTE bụ asịrị.
Njirimara njirimara nke ZTE sitere na MiFavor, Kpọmkwem ụdị 3.2.0 nke na-agba ọsọ na gam akporo 5.1.1. Ugbua eziokwu ahụ bụ na agbanyebeghị ekwentị ahụ na nsụgharị sistemụ Google kachasị ọhụrụ dị ka mhie ụzọ nye m, mana akwa oyi akwa ya na-enweghị atụ dị ka egwuregwu na uto na-adịghị mma.
Na mbụ, ihe niile dị ezigbo mma, ụdị ahụ na-ebupụta na-enweghị drawer ngwa nke anyị hụrụla ọtụtụ oge na ndị nrụpụta Asia ndị ọzọ, mana ọkwa na-amalite. Na m achọ ịma. Mbụ ozi na-egosi na-ehichapụ ebe nchekwa na ngwa mechiri, na-amanye anyị ịhọrọ ngwa ndị anyị agaghị emechi. Mgbe ahụ anyị nwere ọkwa ọzọ na-egosi na ngwa na-echedo ekwentị anyị maka ụbọchị narị anọ.
Nkịtị, n'ihi na ị na-atụle ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwa ndị arụnyere, ọ ga-atụ anya na ụfọdụ ga-abụ antivirus. Ha dị mma maka ihe ọ bụla? Agwala m agwa gị na imirikiti anaghị eme ya. Agaghị m egbusi oge n’ikwu maka usoro mmegharị aka ya, enwere ụkọ na m mechara kwụsị iji ya.
Naanị ihe m na-azọpụta site na interface a bụ Omenala nke akara ngosi, ndabere na nkọwa ndị ọzọ dị mfe ma dị mfe, inwe ike hazie ekwentị dị nnọọ mfe.
ZTE Axon Mini na-egosi akwara nwere ihu igwe AMOLED dị egwu
Ọ bụrụ na ZTE Axon Mini nwere ike ịnya isi maka ihe, ọ bụ ihuenyo ya. Ma nke ahụ bụ 5.2-anụ ọhịa AMOLED panel na 2.5 D teknụzụ nakwa na o nwere mkpebi nke 1920 x 1080 pikselụ na-enye ọmarịcha onyonyo onyogho. Ya 5.000: iche iche larịị. Agba dị oke mma, ekele maka nwa ahụ zuru oke nke AMOLED pan na-enye.
Akụkụ nlele ahụ sara mbara nke ukwuu, na mgbakwunye na ịrụ ọrụ zuru oke na mpụga, na mgbakwunye na ọkụ ọkụ ZTE Axon Mini ghọrọ ezigbo enyi maka ndị na-agụ akwụkwọ ebe ọ bụ na mbenata nchapụta na opekempe anyị nwere ike ịgụ na-enweghị nsogbu. ihuenyo.
Na nkenke, otu n’ime akụkụ dị ịtụnanya nke ekwentị. Ma ọ bụrụ na anyị echebara nke ahụ echiche na ZTE Axon Obere na-efu ihe na-erughị euro 300, M na-ama na-agwa gị na ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ihuenyo na ya nso. Ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị nwere ezigbo panel, ZTE Axon Mini bụ nhọrọ iji tụlee.
Igwefoto zuru oke na-enweghị oke ngosi
Ọ bụ ezie na anyị na-ahụkarị ọnụ na-ejikọ Sony anya m, eziokwu bụ na e nwere ndị nrụpụta ndị ọzọ n'ahịa a. Na ZTE kpebiri nzọ na Samsung, na-arịgo ihe mmetụta 13 megapixels sitere na onye nrụpụta Korea.
Ihe mmetụta Samsung 3M2 nwere a frasi nchọpụta ngwa ngwa na-elekwasị anya usoro, flash ikanam sọrọ na lens nwere oghere f / 2.2. Ihe si na ya pụta bụ ezigbo mma gbaa gburugburu na-enwu gbaa, na-enye grainy foto na ọnọdụ dị ala.
El igwefoto igwefoto n'ezie mfe, na-enye menu dị mfe zoro ezo n'akụkụ aka ekpe nke na-egosi ụdị foto eserese dị iche iche. Manualkpụrụ akwụkwọ ntuziaka na-apụta ìhè karịsịa, nke ga-enye anyị ohere iwepụta onye na-ese foto na anyị niile nwere n'ime, na-agbanwe ụkpụrụ dị iche iche dịka nguzo ọcha ma ọ bụ ntọala ISO.
Obi sie gị ike na, ọ bụrụ na ịchọghị itinye aka, ọnọdụ nkịtị, yana ntọala niile na akpaka, na-enye ezigbo mmezi na arụmọrụ, na-ese ezigbo foto, na-enweghị ịhazigharị usoro ọ bụla.
Enwere m mmechuihu na ọnọdụ HDR. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị anya na nsonaazụ ndị ọzọ na-enye. O doro anya na echiche nke ZTe bụ iji chekwaa agba okike nke foto ahụ ma zere ịmanye agba ndị nwere oke na ọnọdụ HDR, mana ha adaghị ntakịrị n'uche m.
Igwefoto dị n'ihu na-enyekwa arụmọrụ dị mma. 8 megapixels ya ga-atọ ndị hụrụ ihe osise onwe ha ụtọ maka ọnọdụ Mma ya, nke na-eme ka ọ dị ọhụrụ, na-enwu gbaa ma mee ka mmadụ see foto slimmer.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-enweghị 4K mma, na ZTE Axon Mini nwere ike idekọ na usoro HD zuru ezu, Na mgbakwunye na inwe ike idekọ Timelapse na ngwa ngwa mmegharị vidiyo. N'ikpeazụ, ahapụrụ m gị ọtụtụ foto enwere na ZTE Axon Mini ka ị wee hụ ogo nke oghere ya.
Osisi foto nke ZTE Axon Mini
N'ikpeazụ achọrọ m ikwu banyere nnwere onwe. ZTE Axon Mini nwere a batrị lithium na-enweghị iwepu na-eru 2.800 mAh. N'ileghachi anya na ngwaike nke ekwentị ZTE ọhụrụ, o doro anya na ọ nwere ike ịkwado oke ya, mana ruo ole mgbe?
Na nke a, ZTE Axon Obere ejiriwo m anya ju m anya. Site n'iji ya kwa ụbọchị, igwu egwuregwu, ikiri vidiyo ole na ole, netwọkụ mmekọrịta yana ozi ịntanetị emekọrịta yana ekwentị ejirila nke ọma otu ụbọchị na ọkara. Iru 6 elekere na ihuenyo on.
ZTE ka kachasị ekwentị nke ọma, nke na-enye ihe karịrị ezigbo nnwere onwe, karịrị ụdị ndị ọzọ n'otu ụdị. Ọ bụ ezie na ọ nweghị sistemụ ngwa ngwa ngwa ngwa, ekwesiri ịmara na chaja 1.5 A na-enye ohere ka ZTE Axon Mini gbaa ụgwọ naanị n'okpuru awa abụọ.
ZTE Axon Mini dị ka nnukwu ekwentị na Ọ nwere ngwaike iji dakọtara, oke mma dị mma na ihuenyo dịpụrụ adịpụ site na ndị asọmpi ya. Ma ya interface iwe na-ewe iwe ntakịrị ntakịrị site na ahụmịhe nke iji ekwentị nke nwere ike inyekwu site na iji interface na-ejighị ngwa na bloatware.
Ogo ọdịyo bụ n'ezie elu
Ihuenyo AMOLED ya dị mma
Igwefoto igwefoto dị ezigbo mma
Received natabeghị Android 6.0 ma
ihe nkpuchi iris na uda olu ha na ewe oge iji mara gi
Omenala interface bụ ihe kachasị njọ m nwara,
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » ZTE Axon Mini: nyocha na echiche
kamen p. dijo
Dị ka ha na-ekwu na nyochaa, ihuenyo bụ ihe kachasị mma nke ekwentị a na ụda. M jidere ya n'oge na-adịbeghị anya maka € 219 na vayva.es
Zaghachi Carmen P.
Foto ọzọ blurry nke Nexus Sailfish na-egosi
Google Duo, nke dị taa na android na iOS